Imaam Sacuudi oo 45 Maalmood loo Xiray Aflagaado Atoore – Radio Daljir
Imaam Sacuudi oo 45 Maalmood loo Xiray Aflagaado Atoore
May 31, 2017 7:21 g 0
Maxkamadda Danbiyada ee Sacuudiga ayaa markii ugu horraysay ridday xukun ka dhan ah Imaam Masaajid ee magalaada Asir ee dalka Sacuudiga. Waa xukunkii ugu horreeyey Sucuudiga ee lagu rido imaam masjid aflagaado darteed, waxaana Imaamka lagu xukumay 45 maalmood oo xarig ah.
Danbiga Imaamka ayaa ahaa in uu khudbadii Jimcaha ku soo daray eed iyo aflagaado uu la beegsaday fannaaka Sacuudiga ee Nasser al-Qasabi, asaga oo atooraha ku eedeeyey in uu yahay ‘infidel iyo cuckold’ ama “diin-laawe aan diinta islaamka haysan oo sharmuud ah.”
Qaalliga maxkamadda ayaa Imaamka ku khasbay in uu falkaas raalligelin ka bixiyo, ballanqaadana in uusan mar danbe ku kici doonin falka ama mid kale oo la mid ah. Imaamka wuu fuliyey awaamiirta qaaliga.
Sacuudiga ayaa indhawaalaba waxaa saaran cadaadis kaga imaanaya beesha caalamka, laguna eedeeyo in Sacuudigu dhiirigaliyo xagjirnimada iyo u isticmaalka diinta si qalloocan oo sida hubkii loo adeegsado.
Boqor Salmaan iyo Trump ayaa bishaan May waxay si wadajir ah Riyaad uga fureen “Xarunta Ladagaallanka Argagixisada” wuxuuna Boqor Salmaan ballanqaaday in Boqortooyadu ay fiiro gaar ah u yeelan doonto nooc kasta oo xagjirnimo.
Sannadkii 2014 Sacuudigu wuxuu Xarunta Ladagaalka Xagjirnimada iyo Argagixisada ee UN-ta ugu deeqay $100 milyan. Sidoo kale Sacuudigu wuxuu bixiyey lacagtii lagu abuuray fikirka Xarunta sannadkii 2011.